Shina: Nobel Nofinofy · Global Voices teny Malagasy
Shina: Nobel Nofinofy
Voadika ny 11 Oktobra 2018 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Türkçe, Swahili, Deutsch, বাংলা, English
Tamin'ity volana ity, dia tototra vaovao momba an'i Charles Kao, nandrobaka ny loka Nobel momba ny Fizika ny gazety Shinoa sy ny sehatra fiadian-kevitra antserasera. Saingy mpahay siansa Shinoa hafa any ampitan-dranomasina no nahazo ity loka malaza ity, nivadika ho fanontaniana lalindalina kokoa ity fotoana vetivety nizarana voninahitra ity: Rahoviana i Shina no hanana indizeny voalohany mpandresy loka Nobel?
Fanehoan-kevitra ao amin'ny Xinhua manoritsoritra ity psykôlôjia ity:
Isan-taona, rehefa ambara ny mpandresy ny Loka Nobel, dia ho lasa be fihetseham-po ny Shinoa. Raha taranaka Shinoa ilay mpandresy, dia ho tena faly izy ireo. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy, mihena izany fientanentanana izany ary mivadika ho tsy firaharahiana. Rehefa tonga ny taona manaraka, dia miverina indray izany
詹晟 nanontany tao amin'ny bilaogin'i ifeng:
Nilaza ny olona sasany fa karazana fanavakavahana ny Sinoa izany- tsy homena ny Shinoa ny Loka Nobel, fa homena fotsiny ny olona iray manana zom-pirenena. Noho izany, ny fepetra takiana ho an'ny Shinoa mba hahazoana ny loka dia ny ho lasa olom-pirenena Amerikana. Fa nahoana ny Shinoa no afaka mahazo ny loka rehefa manova ny zom-pirenena?
Azavaina amin'ny lahatsoratra ao amin'ny bilaogy sina 青青草香 izany:
Rehefa miresaka “Amerikana Shinoa” isika, ny tenifototra dia tsy “Amerikana” fa “Shinoa”. Taorian'ny tatitra mafana tamin'ny media, dia nihevitra isika fa nahazo ny rehareha Nobel ihany koa ny Shinoa rehetra. Nionona ny fo marefo ao amintsika.
Charles Kao no Shinoa fahavalo nahazo ny Loka Nobel. Raha mahatsapa rehareha isika, dia tokony hametraka fanontaniana mahamenatra ve hoe:. Nahoana no mahazo ny loka Nobel ny Shinoa rehefa any amin'ny firenena vahiny fa tsy ao amin'ny taniny? Charles Kao is the eighth Chinese Nobel Prize winner. While we are feeling proud, should we ask the embarrassing question: why could Chinese win Nobel Prizes when they are in a foreign but not our own country?
Fanehoan-kevitra avy amin'i 丁 果 ao amin'ny Southern Metropolitan Weekend nanasongadina olana ara-drafitra vitsivitsy eo amin'ny tontolo akademika Shinoa:
Mbola tsy ampy tontolo akademika malalaka isika, ka mampanano-sarotra ny fikolokoloana ireo talenta vaovao, tsy ampy fitaovam-pikarohana fototra sy avo lenta i Shina, ka mampanano-sarotra ny fisarihana ny Shinoa hiverina ao amin'ny taniny, tsy ampy tontolo ara-tsosialy i Shina hikolokolana ireo hevitra vaovao sy fiarahamonina sahaza ho an'ireo mpahay siansa malaza mba hijanona mandritra ny fotoana maharitra.
詹晟 sy 青青草香 niresaka ihany koa momba ireo zava-misy hafa manahirana.
詹晟 nilaza hoe:
Jereo ny tontolo akademika lò any Shina. Misy ny antsoina hoe famoahana boky marobe avy amin'ireo mpanoro lalana ho an'ireo manala doktorà, izay mety mahatratra hatramin'ny am-polony isan-taona. Tia mampiasa mpanolo-tsaina vahiny ny governemanta eo an-toerana mba hahazoana toro-hevitra satria izany no fihetsika “misy filirolirony” .
Raha tsy misy ny tontolo akademika henjana sy manana rafitra mahomby amin'ny fanomezam-balisoa, na dia manana voninahitra maha-“Mpampianatra Vahoaka” aza, dia handao ny faribolana ny ankamaroan'ny manam-pahaizana ary hanatevin-daharana ny tontolo ara-barotra.
Azontsika atao ny manome tsiny an'i Shina miovaova na ny onjan'ny fitiavan-karena izay antony mahatonga ny tsy fanarahan-dalàna rehetra. Saingy moa ve tsy mifandraika amin'ny kolotsaintsika sy ny toe-tsaintsika izany?
青青草香 nanamarika hoe:
Tia mampiasa tarehintsoratra i Shina. Ny isan'ireo taratasim-pikarohana navoaka dia natao hamaritana ny toetra akademikan'ny olona, na hijerena raha afaka miditra amin'ny fianarana asa amin'ny fanohanana ny fianarany ny mpianatra fikarohana. Eo ambanin'izany rafitra izany, dia samy tsy maintsy mamoaka antontan-taratasy marobe, ahitana taratasim-pngalaran-tahaka marobe ireo mpampianatra sy mpianatra. Raha lasa laharana voalohany amin'ny famokarana famakafakana lahatsoratra akademika i Shina, dia mety ho laharana voalohany amin'ny famokarana fako akademika ihany koa.
Araka ny rafi-pampianarana sy ny fikarohana amin'izao fotoana izao, sarotra ho an'i Shina ny mikolokolo ireo mpahay siansa liberaly, mahaleotena sy tia zava-baovao. Mila fotoana ny famokarana Loka Nobel voalohany ho an'ny Shinoa tompotany.
Ao amin'ny bilaogy iombonana amin'ny teny Anglisy, the Fool's Mountain, misy ihany koa ny adihevitra mafana momba ny “Inona no fifandraisana misy eo amin'ireo mpanoratra Shinoa sy ny Loka Nobel”.